Xasuuq Ba,an oo ka dhacay Qabridaharre.
Sababta keentay gadoodka maxaabiista.
Siday dadwaynuhu dhibaatadan u dareemeen.
Telefoonnadii Qabridaharre oon shaqaynaynin.
Bayaan JWXO ka soo saartay xasuuqa.
Barnaamijkii Xog-Warran (Warbixin ku saabsan xasuuqii Qabridaharre)
HADALKII GEEDI EE MACNIHIISU AHAA:: OGADEENYA (S/GALBEED) iyo NFD waxay xoroobeen gobanimo doonkii... Sabatii hadalkaas ka keentay email ku weydii Geedi: emailkiisu waa: premiersom@wananchi.com
Wariyaha Radio Xoriyo uga soo warama dalka Ogaadeenya ayaa soo sheegay in aminga magaalada Qabridaharre uu weli cakiran yahay, ka dib markay ciidamada Wayaanuhu talaadadii bisha Nofember 15-ka ahayd xasuuq u gaysteen maxaabiis ku xidhnayd magaalada Qabridaharre iyo dadwayne rayad ah oo magaalada ku noolaa.
Xasuuqan waxaa ku dhintay dad aad u fara badan, oo maxaabiis iyo dadwayne caadi ahba isugu jira, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad kale oon tiradooda la haynin.
Maxaabiistan sida xaq-darrada ah loogu hayay xabsiga magaalada Qabridaharre ayaa gadood sameeyay, ka dib markii ay yaqiinsadeen in gawaadhi lagu gurayo iyaga iyo dhalinyaro kale oo meelo kala duwan laga soo raafay, isla markaana loo qaadayo dhinaca xadka Eritereya, si ay miino-baadh loogaga dhisgo dagaalka gardarrada ah ee taliska Addis Ababa uu doonayo inuu ku qaado dalka Eritereya.
Ciidammada gumaysiga Itoobiya ayaa caalamka u sheegay in maxaabiistani ay isku dayeen inay baxsadaan, ka dib markii ay laayeen askartii ilaalinaysay, hase yeeshee warar xogogaal ah ayaa sheegaya in arrintaas ayna waxba ka jirin, balse ay ciidammada Wayaanuhu ula-kac u laayeen maxaabiistan iyo dadwaynahan caadiga ah, ka dib markii ka gadoodeen qorshihii raafka ahaa ee ay la doonayeen.
Xukuumadda Itoobiya iyo wakiilkeeda Ogaadeenya u qaabilsan ee xafiiska ku leh magaalada Jigjiga ayaa dhawaan kala saxiixday heshiis ka dhigan in Ogaadeenya laga qaoro ciidammo ka qayb qaata dagaalka Eritereya, iyadoo magaalo walba oo Ogaadeenya ku taalla laga soo ururinayo 500 oo nin. Toddobaadyadii u denbeeyay oo dhan waxaa qaar ka mid ah magaalooyinka Ogaadeenya, oo Qabridaharre ay ku jirto, ka socday raaf
Ciidammada gumaysiga Itoobiya ayaa eedda xasuuqan dusha ka saaray dadkii la laayay, sidii ay markii horaba eed oo dhan dusha uga saari jireen dadwaynaha ay iyagu ku dul-nool yihiin, waxayna sheegeen in maxaabiistu fakad isku dayeen, balse arrintaas waxaa beeninaya dad badan oo xogogaal ah, kuwaasoo faahfaafin ka bixiyay qaabkii ay dhibaatadu ku billaabatay.
Dadkan ayaa sheegaya in dhalinyaro si xaq-darro ah ugu xidhnaa xabsiga Qabridaharre, laga soo kexeeyay xabsiga, iyagoon loo sheegin meesha loo wado, waxaana la keenay xero kale.
Waxaa halkaas loogu keenay dhalinyaro kale oo laga soo xasuuqay meelo kala duwan, kuwaasoo lagu soo dhex-daray. Waxaa markaas ka dib loo sheegay inay imanayaan baabuur lagu qaadi doono, iyagoo xaqiiqsaday in loo wado dagaalka la filayo in taliska Addis Ababa ku qaado dalka Eritereya.
Markaas ka dib ayay dhalinyaradii faraha badnaa ee halkaas la isugu keenay go�aansadeen inay baxsadaan, xilli ay ciidammada Wayaanaha intooda badani qado cunayeen, hase yeeshee waxaa markiiba hareereeyay ciidammada Wayaanaha oo si naxariis la�aan ah u xasuuqay, kuwaasoo markii denbana rasaas aan aaba-yeel lahayn ku furay dadwaynihii caadiga ahaa ee magaalada.
Tan iyo markii ay ciidammada gumaysigu gaysteen xasuuqan nacabnimada, waxay magaalada Qabridaharre ku hayeen argagixin joogto ah. Waxaa magaalada dhex-wareegayaa ciidammo aad u hubaysan, waxaana habaynkii la baadhaa guryaha, iyadoo dadka si kulul loogu hanjabo.
Mar uu Radio Xoriyo la xidhiidhay dadwayne deggan magaalada Qabridaharre waxay u xaqiijiyeen argagaxa iyo caga-jgulaynta dadwaynaha lagu hayo.
�Waligay ma arag mayd sidaas u badan oo jidadka yaalla, oo dadku wada-bargaranayaan, sidaas waxaa yidhi nin dhalinyaro ah oo goobjoog ahaa markii ay ciidammada Itoobiya dadwaynaha ku xasuuqayeen magaalada Qabridaharre�.
�Waxaan dhawrano oo denbe ma jiro, waa inaan kulligeen dabka wada-qaadno, sidaasna waxaa yidhi nin kale oo dhalinyaro, oo si wayn uga cadhaysnaa xasuuqa ay ciidammada gumaysigu dadwaynaha u gaysteen�.
�Waa markii ugu horraysay ee magaalo Ogaadeenya ah dhexdeeda lagu xasuuqo dadwayne intan dhan, iyadoo mid-mid loo ugaadhsanayo, sidaas waxaa yidhi nin kale oon tilifoonka kula xidhiidhnay, isagoo jooga magaalada Qabridaharre, kaasoo tilmaamay inay waajib tahay in dadkan iyo kuwii ka horreeyayba sida ugu dhakhsaha badan loogu aaro�.
Laga soo billaabo habaynimadii khamiistu soo galaysay ilaa iyo jimcihii waxaa bixi la�aa tilifoonnadii magaalooyinka Qabridaharre iyo Godey, waxaana loo malaynayaa in la gooyay.
Xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa ka baqaysa in la ogaado denbiyada aadanaha ka dhanka ah ee ay ciidammadeedu u gaysteen dadwaynaha rayadka ah, sidaas darted waxaa loo badinayaa inay si ula-kac ah u goysay tilifoonnada magaalooyinkaas oo ah qaabka kaliya ee lagula xidhiidhi karo.
Waxay kaloo wararku sheegayaan in ciidammada gumaysiga Itoobiya ay dib u celiyeen koox ka socotay Ururka Laanqayrta Cas oo arbacadii isku dayay inay galaan magaalada Qabridaharre, si ay dhibaatadan wax uga ogaadaan. Ciidammada gumaysigu waxay kooxdan ku amareen inay dib u noqdaan, waxayna ugu hanjabeen inay tallaabo ka qaadayaan haddii ay isku dayaan inay magaalada galaan.
Dadwaynaha ayaa xasuuqan aad uga cadhooday, waxaana guud ahaan dalka Ogaadeenya, gaar ahaan magaalada Qabridaharre ka billowday dhaqdhaqaaq lagaga dhiidhiyayo xasuuqan.
Waxaa jira warar sheegaya in dhalinyaro badan iyo qaar ka mid ah booliskii magaaladu ay baxeen iyagoo u baxay dhulka miyiga ah. Waxaa toddobaadyadii u denbeeyay oo dhan magaalooyinka ka baxayay dhalinyarada, ka dib markii ay ciidammada gumaysigu billaabeen raaf ay dhalinyarada qasab ku ciidamynayaan.
Dhinaca kale Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya JWXO ayaa xasuuqan bayaan kulul ka soo saartay maalintii arbacada ahayd, waxyna Jabhaddu si wayn u canbaaraysay xukuumadda Addis Ababa, oo caadaysatay dilka iyo xadgudubyada ay u gaysto dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya.
Jabhaddu waxay bayaankan ku sheegtay in marka laga soot ago dadka xasuuqan ku dhintay ay jiraan boqollaal kale oo ku dhaawacmay, kuwaasoo aan helin daryeel caafimaad iyo gurmad.
Jabhaddu waxay beesha caalamka ugu baaqday inay canbaarayso xasuuqan waxshinimada ah ee ciidammada gumaysiga Itoobiya gaysteen, isla markaana baadhayaal caalami ah loo diro halkaas, si ay u soo badhaan denbiyada halkaas ka dhacay.
Jabhaddu waxay tacsi u dirtay dhammaanba dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya, gaar ahaan qoysaskii iyo ehaladii ay ka geeriyoodeen dadwaynihii lagu xasuuqay magaalada Qabridaharre.
Dhegaystayaal faahfaahin kale oo xasuuqan ku saabsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Xogwarran.
18 November. 2005
Magaalada Qabri Dahare oo maanta ay Ciidamada Itoobiya dad ku xasuuqeen.
Waxaa 15/11/2005, Abaarihii maqribnimo ka dhacay magaalada Qabridahare xasuuq aad u fool xun oo lagula kacay dadka shacabka ah, dadkan la xasuuqay waxay ka mid ahaayeen dad ku xidhan xabsi ku yaal magaalada Qabridahare. Dhimashada waxaa lagu sheegay 16 ilaa 18 tirdii ugu dambeysay, halka dhaawucu ka yahay 25, ilaa hadana ma cada in dadkii dhaawaca ahayd ay wax ka dhinteen iyo in kale.
Xasuuuqa dadkan loo geystay ayaa ka bilowdey kadib markii Ciidamada Wayaanuhu bilaabeen in ay maxaabiista baabuur u keenaan loogu daad gureeyo Xuduuda Eritrea oo laga yaabo in dagaal ku dhaxemaro Itoobiyo iyo Eritrea.
Hadaba dadka shacabka ah oo jeelasha ciidamada Itoobiya ee magaalada Qabri Dahare si sharci daro ah ugu jirey ayaa diiday in ay fuulaan baabuurtii loo keenay si loogu qaado tuulada Baadame. Kadibna Ciidamada Tigreaga ayaa rasaas ooda kaga qaadey. Waxaana halkaas ka bilowdey in maxaabiistii firxad bilaabaa oo qof walba meeshii ka hortiisa ahayd u nafta kula ordo. Intaas kadib ayaa Ciidamada Itoobiya ee magaalada ka hawl gala bilaabeen in ay magalaada rasaas ooda kaga qaadaan iyagoo halkaas ku laayey dad aad u tiro badan kuwa kale oo badana ku dhaawacey.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in ay magaalada guri guri u galeen, isla markaana bando ku soo rogeen, iyagoo maxaabistii dhamaantood suuqa magaalada uu maydkoodu wadhan yahay.
Waxaa kale oo na soo gaadhaya in laba Gabdhood oo ka mid ah dadka shacabka ah ee magalaada oo xabadu haleeshay dhaawcoodii Isbataalka magalada loo qaadey, balse ay Ciidamada Itoobiya kala baxeen Isbataalka labadii Gabdhood oo aan ilaa hadda la ogeyn waxa ay xaaladoodu ku sugantahay.
QAFAAL KA SOCDA DHAMAAN GOBOLADA OGAADENIYA:
Waxay Ciidamada Itoobiya ee ka hawlgala Ogadeeniya bilabeen olole ciidamo aruurin ah. Ciidamadan oo la doonayo in la geeyo Xududa Eritrea iyo Itoobiya.
Hadaba wararka naga soo gaadhaya meelo badan oo Ogadeniya ka mid ah ayaa sheegaya in bilaabeen in ay makarafoono qaataan oo ay dadka la dhaxmaraan, magaalooyinka waaweyn sida Qabridahare, Dhagaxbuur, Godey iyo meelo kalea.
Ilaa hada ma jiraan wax u suurta galay oo weyn, laakiin waxay Ciidamada Itoobiya go'aan ku gaadheen in ay qafaalasho iyo raaf bilaabaan, waxayna ka bilaabayaan Ardeyda dugsiyada, laga bilabo fasalka sadexaad ilaa dugsiga sare iyo macadyada kala duwan intaba.
Waxaa Shabakada Ogade Online u suurta gashay in ay la xiriirto dad ku sugan magaalada Godey, waxayna noo shegeen in uu joogo Madaxa ugu sareeya ciidamada Itoobiya ee ku sugan Ogaadeeniya, kaas oo ka soo tagay magaalada Qabri Dahare oo ay waxba uga suurta gali waayeen, wuxuuna la kulmay Odayaasha, shaqalaha, culumaa'udiinka, iyo ganacasatada, wuxuuna u sheegay in ay ciidamada ku qaadan doonaana lacag fiican gaar ahaan Ardeyda Dugsiydada Sare iyo wixii la midka ah, waxaana la sheegayaa in wax aan badnayn iska diiwaan gaiyeen xeyaha ciidamada.
Waxaa xusid mudan in dagaalkii 1998-2000 ee Itoobiya iyo Ertariya ay ka qayb qaateen kumanaankun oo ka soo jeeda Soomalida Ogadeniya, kuwaas oo ciidamada qortey kadib markii loo balan qaadey in laga dhigayo boolis ka hawlgala Goboladooda oo la siin doono mushaar aad u fiican. Balse dhalinyardaas ayaa loo xaabiyey dagaalkii Eritrea iyo Itoobiya dhexamray sanadkii 2000. Dagalakaas oo ay ku nafwaayeen in ka badan 70,000 (todobaatan kun) oo qof, kuwaas oo u badnaa dhinca Itoobiya.
Hadaba dhalintaas oo ay Ciidamada Tigreegu isaga dhigeen xabada Erirea, meydkoodana ka dhigteen dhufeys ayaa si aad ah ugu le'day dagaalkaas xaq darada ahaa, intii ka soo bad-baadey dagaalkaas waxay hada ku silicsanyihiin xerada jajabka ama naafada ee ku taal bariga magaalada Jigjiga.
Dhinca kale, dawladda Itoobiya waxay diiday in ay aqoonsato ama qaadato maydka dhalinyaradaas laga soo aruuriyey Ogadeniya, waxaana halkaas ku gablamay Hooyooyin badan, kuwa kale oo badana waxay la il daran yihiin daryeelka wiilashodo ku soo waxyeeloobey dagaalkaas.
ITOOBIYA OO HUB AAD U BADAN KALA SOO DAGEYSA DEKDA BERBERA
Wararka naga soo gaadhaya Gobolada Waqooyi Galbeed, gaar ahaan Magaalada Berbera ayaa sheegayn in dakada Berbera ay ku soo xirteen maraakiib sida shixnado hub ah oo ay Ioobiyada kala soo dagayso hub iyo rasaas.
Waxaa la xaqiijiyey in xalay 150 gaari oo ina tareeyo ah laga raray magaalaada Bebera, goor habeen ahna la mariyey Hargaysa oo xuduudana la dhaafiyey isla xalayba.
Sidoo kale caawa waxaa la bilaabay dajinta markab kale oo hub sidey, waxaana la diyaariyey 200 oo gaari oo hubkaas iyo saanadaas lagu qaadi doono isla caawa.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in dhamaan shaqaalihii ama xamaaligii dekada Berbera loo diidey in ay wax ka arkaan ama ka rogaan maraakiibtan, waxaana hubkan iyo saanadan milatari dajiyey ciidan Itobiyaan ah oo horay loogu sii diyaariyey dekada.